Nisesy ny fahoriana ho an’ny FLM: lavon’ny Covid-19 koa ny pastora Rabenorolahy Benjamin | NewsMada
Mitohy ny fisaonan’ny FLM sy ny FFKM. Namoy ny ainy noho ny Coronavirus indray koa ny filoha teo aloha ny FLM, ny pastora Rabenorolahy Benjamin. Vao ny asabotsy alina teo anefa no nodimandry ny filoha am-perinasa an’ity fiangonana ity.
Nodimandry, omaly tetsy amin’ny TPLA Ambohibao, noho ny aretin’ny voa sy ny Covid-19 ny pastora Dr Rabenorolahy Benjamin. Nanamafy izany fahalavoany noho ny Coronavirus izany ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololontiana Hanta. « Marihina fa avy eto Analamanga ny iray namoy ny ainy, ny filoha teo aloha ny FLM », hoy izy. 80 taona ny tenany izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Voafidy ho filoha’ny FLM tamin’ny fivorian’ny Synoda lehibe natao tany Taolagnaro, ny taona 1989, ny pastora Rabenorolahy Benjamin ary nitantana izany hatramin’ny taona 2004. Anisan’ny andraikitra efa nosahaniny ny naha filohan’ny Synodam-paritanin’i Menabe azy. Teo koa ny nisahanany ny toeran’ny talen’ny STPL Betela, Morondava.
Anisan’ny namaha ny krizy politika 1991
Teo amin’ny lafiny politika sy ny fiainam-pirenena kosa, anisan’ireo filoham-piangonana nandrafitra ny FFKM ny tenany. Niaraka taminy tamin’izany ny filohan’ny FJKM, ny mpitandrina Ramambasoa Joseph, sy ny avy amin’ny anglikanina (EEM), ny Mgr Rabenirina Remi Joseph, ary ny avy amin’ny fiangonana katolika, ny kardinaly Razafimahatratra Victor. Anisan’ny nanelanelana tamin’ny famahana ny krizy ny taona 1991 ny tenany ary filoha nitarika ny FFKM tamin’ireny fifanarahan’ny Panorama Andrainarivo, 31 oktobra 1991, ireny.
Efa loholon’i Madagasikara
Ankoatra izany, efa mpanolotsain’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, fony teo amin’ny fitondrana, izy. Efa loholon’i Madagasikara, anisan’ireo mpikambana koa teo anivon’ny Antenimierandoholona tamin’ny fitondran’ny antoko Tiako i Madagasikara.
Tsiahivina fa filoha fahatelo teo anivon’ny FLM ny pastora Rabenorolahy Benjamin. Nandimby azy avy eo ny pastora Rakoto Endor Modeste, filoha fahefatra hatramin’ny taona 2016. Voafidy ho filohan’ny FLM, ny septambra tamin’io taona io, avy eo ny pastora Rakotonirina David, vao nodimandry ny asabotsy teo.